मोबाइलमा ५ घण्टाभन्दा बढी समय बिताउनेमा मोटोपनाको खतरा - Ramechhap Online
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि चितवन पुगेका धुर्मुसले आजदेखि पुनः काम सुरु गरे !
दुई बच्चा सहित महिला नारायणीमा हाम फालिन
पार्टी प्यालेसमा दर खानेलाई कारबाही हुने
भिजाएको चना खानुस्, फाइदै फाइदा मिल्छ
हिरोइन बन्न सुन्तलीलाई कसले रोक्यो ? (भिडियो अन्तर्वाता)
‘रातो टीका निधारमा’को पहिलो गीत सार्वजनिक हेर्नुहोस भिडियो सहित
छोरी जन्मेपछि श्रीमतीलाई छो*डेर भागे श्रीमान्, समाजले छुई भन्यो, बेसहारा भइन सु*त्केरी
भद्रगोलका जयन्तेको फेसबुकले जुराएको सुन्दर परिवार……(हेर्नुहोस् फोटो फिचर)
म्याग्दीमा ४.७ रेक्टरको भूकम्प
के हो डिप्रेशन? किन महिलालाई नै बढी हुन्छ ? जसबाट बच्नका लागि अपनाउनुहोस् यस्तो उपायहरु
मुख्य पृष्ठ /रोचक/मोबाइलमा ५ घण्टाभन्दा बढी समय बिताउनेमा मोटोपनाको खतरा
मोबाइलमा ५ घण्टाभन्दा बढी समय बिताउनेमा मोटोपनाको खतरा
काठमाडौं । मोटोपना बढाउने एक कारण मोबाइलको अत्यधिक प्रयोग हुनसक्ने देखिएको छ । क्यालिफोर्नियाको सिमोन बोलिभोर युनिभर्सिटीको अध्ययनले दिनभर ५ घण्टा प्रयोग गर्दा मोटोपन बढ्ने खतरा ४३ प्रतिशतसम्म बढ्नसक्ने पाइएको छ । अध्ययनमा मोबाइलमा व्यस्त रहँदा शारीरिक गतिविधि नहुनु र धेरै खानेकुरा खानु पनि सामेल छ ।अध्ययनमा १ हजार विद्यार्थी सामेल थिए ।
जुन देखि डिसेम्बर २०१८ मा यो अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनअनुसार मोबाइल अत्यधिक प्रयोग गर्ने विद्यार्थी पेय पदार्थ, फस्ट फुडलगायतका खाना खान्छन् । साथै अभ्यास कम गर्छन् ।
यसले मानिसको मेटाबोलिज्म सुस्त हुन थाल्छ र निद्रा नलाग्ने समस्या बढ्छ । जसको कारण तौल बढ्न थाल्छ ।शोधकर्ता तथा हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर मिरेरी मेन्टीला–मोरोनका अनुसार अध्ययनमा बिरामिको हातमा भएको मोबाइल स्वास्थ्य बिगार्ने प्रमुख कारण हो । लगातार मोटोपना बढ्नुले मुटुको रोग पनि लाग्न सक्छ । अनुसन्धानमा पाइएअनुसार २५ प्रतिशत विद्यार्थी धेरै तौलका थिए ।
जो प्रतिदिन ५ घण्टाभन्दा बढी समय मोबाइल चलाउँथे
टेक्सासका राइस युनिभर्सिटीका अनुसार फोनको अत्यधिक प्रयोग गर्ने मानिसलाई फास्ट फुड दिने हो भने उनीहरुको आफूमाथिको नियन्त्रण कम हुन्छ । यसअघि सन् २०१६ हावर्ड चेन स्कुलको अध्ययनमा पनि मोबाइलमा धेरै समय बिताउँदा मोटोपना बढ्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो ।
यी ३ राशि भएका पुरुषप्रति महिलाहरू प्रेममा पागल हुन्छन्
देशमा थोरै ठाउँमा सामान्य वर्षाः यस्तो छ तीनदिनको मौसम पूर्वानुमान
भगवान यस्तो कसैलाई नहोस् : पिसाब थैलीमा १२० सि.एम को बिजुलीको तारा पसेपछि [भिडियो]
ओली बाको रेल’मा फुलन्देकी आमा र लट्टेको प्रेम कहानी !
यस्ता छन् खीरका फाइदा
गर्भवती महिलाको ह*त्या, गायिका विष्णु माझीको नाम पनि जोडियो ? (भिडियो)
गायिका मेलिना राईको बिहेको मिति सर्यो,प्रेमीको बिषयमा उनले गरिन नया खुलासा,फोटो किन लुकईन?हेरौ
जापानमा उत्तर कोरियाले खसाल्यो शक्तिशाली मिसाइल, जापानमा भागदौड र रुवाबासी ! हेर्नुहोस (भिडियो)
भीटेन र शिल्पा मास्के प्रेममा ? फ्यानले भने– जोडी सुहायो
के तपाईको पनि दाँतको बीचमा खाली ठाउँ छ ? जान्नुहोस् यसको अर्थ